वीरगञ्जवासीको प्रश्न ५० विघा जमिन कतिमा बेचियो ? प्रधानमन्त्री देउवा जी
वीरगञ्जस्थित नेपाल–भारत सीमामा पर्ने छपकैयामा ५० विगाहा जमिन भारतीय पक्षले मिचेको भन्दै सरकारविरूद्ध काठमाडौंमा प्रर्दशन गरिएको छ । नेपालीहरूको नाममा रहेको करीब ५० बिघा जमिन भारत तर्फ पर्ने गरी नयाँ सिमा स्तम्भ गाडीएको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता अभियानले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो ।
सीमा क्षेत्रको विषयमा वकालत गर्दै आएको ग्रेटर नेपालले शुक्रबार मिनभवनस्थित नापी विभागमा पुगेर नेपालको सीमा भारतले मिच्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै एकघण्टे धर्नासहित विरोध प्रर्दशन गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।
यता, सरकारले भने वीरगञ्जमा भारतले नेपालको सीमा नमिचेको स्पष्टीकरण दिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले वीरगंजमा नेपाली भू–भाग भारतीय पक्षले मिचेको भन्न नमिल्ने दाबी गरे ।
उनले नापी विभागले प्रमाणको आधारमा मात्रै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको तर्क समेत गरे । नापी विभागले वीरगञ्जमा भारतले नेपाली भूमिका मिचेको हो–होइन, छानविन गर्न निर्देशक नेतृत्वकै टोली फिल्डमा पठाइ सकिएको पनि जनाएको छ ।विभागले वीरगंज नगरपालिकास्थित नेपाल भारत सीमामा नेपालको ५० विघाभन्दा बढि जमिन मिचिएको भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै आएको छ ।
नेपाल भारत ले बेला–बेलामा नेपाल माथि कब्जा गर्न खोज्दा पनि हाम्रो नेताहरूले भने केहि गर्न नसकेको बेला रबी लामिछाने भारतको सातो उढाएका छन् । नेपाल माथि गररेको भुमि कब्जाकोविषयमा हाम्रो नेताहरू बोल्न नसक्ने भए पनि रबि ले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई ठुलो झड्का दिएका छन् ।
भारतले सीमास्तम्भ सारेर ५० बिघा जमिन मिच्यो, सरकार भन्छ भारतले मिचेकै छैन भारतले सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणका क्रममा सहायक सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ५० बिघा जमिन मिचेको छ ।
अहिले नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ।नेपालतर्फ सर्भे विभागकै टोली र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । एसएसबीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा सहायक स्तम्भ नेपालतिर सारेर नेपाली भूमि मिचेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । छपकैया क्षेत्रमा १२ जनाभन्दा बढी स्थानीयको नम्बरीसहित झन्डै ५० बिघा जमिन मिचिएको स्थानीयको दाबी छ ।
वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाड्नलाई खाल्डो खनेपछि आफूहरू छक्क परेको र त्यसको विरोध गरेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए । ‘हामीलाई थाहै नदिईकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदीपारि छ, तर नयाँ पिलर नदीवारि ल्याइएको छ । हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौँ, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ?’ गत २२ पुसमा नेपालको सर्भे टोलीले आफ्नो कित्ता नम्बर १४ को नम्बरी जग्गामा सीमास्तम्भ गाडेको कोइरीको भनाइ छ । त्यसैगरी, स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पारिएको छ ।
जग्गामा स्तम्भ गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि आएर विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्री साह कानुले बताए । नयाँ स्तम्भ गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुबाबाट बुबाहरूको नाममा आएको कित्ता नम्बर ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए ।
स्थानीयले दुवै देशका अधिकारीहरूले नापेर सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण गरिरहेको भनिए पनि लापर्बाही भएको आरोप लगाएका छन् । तिरो तिरेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् । नदी वारिपारि गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ ।’ रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘बर्से्नि तिरो तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने, राज्यले हामीलाई कसरी दियो ? ’
सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका आधारमा अहिले स्तम्भ गाड्ने काम भइरहेकाले नेपाली जमिन भारतमा जानै नसक्ने दाबी प्राविधिक टोलीको छ । त्यस क्रममा कतिजना स्थानीय वासिन्दाको कति जमिन पर्छ त्यसको तथ्यांक लिएर फारम भरेर माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेको पनि उनले बताए । राजतन्त्र हटाउनलाई बाउ(छोरा लडाउन सक्ने हाम्रो नेताहरु आज किन भारत सँग डराएका छन कि सत्ता गुमाउने डरले भारतको चाकरी गरेका त होइनन् ? यो कुरा तिर सोच्नु जरुरी छ ! आफु सत्तामा पुग्नलाई हजारौको बली दिन सक्ने तर आफ्नो देस बचाउन लाई झुटा कुरा भएको भनेर वास्तविक कुरा जान्न नखोजने हाम्रो नेताहरुले के देस बिकास गर्छन होला र आफ्नो भलो हुने कुरा आयो भने देस बेच्न नि पछि पर्दैनन् हाम्रा नेताहरू आफ्नो छोरा छोरि अमेरीका जस्तो ठुलो देसमा रजाई गर्न पठाउछन् तर यहा नेपाली जनताहरुले एक छाक पनि खान गारो भएको छ के यही हो त प्रजातन्त्र ? युद्धको बेला खाएको कसमहरू कता गयो नेता ज्यु ? के आफ्नो ढुकुटी भर्न मात्र राजनीतिमा लाएको हो त ? – www.janabolinews.com
पोखरामा जमिन भा’सिदा ढ’ल्यो बिजुलीको पोल , किन बेला बेलामा भा’सिन्छ पोखराको जमिन ? (भिडियोसहित )